१६ औं आहा ! रारा... :: सुजिता कार्की :: Setopati
१६ औं आहा ! रारा गोल्ड कप फुटबल हुँदै
सागर राज तिमिल्सिना पोखरा, मंसिर १७
आहा ! रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको १६ औं संस्करण माघको दोस्रो सातादेखि सञ्चालनको तयारीमा सहारा क्लब लागेको छ।
सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा माघ ९ देखि २० गतेसम्म सञ्चालन हुने आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहारा क्लबका अध्यक्ष केशब बहादुर थापाले जानकारी दिए।
प्रतियोगितामा विदेशी ४, विभागीय टिमसहित ‘ए’ डिभिजनका क्लबहरू, पूर्व र पश्चिम क्षेत्रबाट १/१ टिम र आयोजक सहारा क्लब पोखरा गरी १२ टिमको सहभागिता हुने थापाले जानकारी दिए। उनले विदेशी टिममा चिन, बंगलादेश, भारत र जापानका एक/ एक वटा टिमसँग कुराकानी अगाडि बढेको बताए।
प्रतियोगिताबाट १ करोड २१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने र ९० लाख ५ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। ‘खेलकुदको विकासमा सहकार्य गरौं, पोखरालाई खेलकुद पर्यटन सहरको रूपमा स्थापित गरौं’ भन्ने उद्धेश्यका साथ सहारा क्लबले संचालन गर्दै आएको प्रतियोगिताबाट बचत भएको रकम सहारा एकेडेमीमा रहेका बालकहरूको भरण पोषणमा खर्चिदै आएको थापाले बताए । हाल तेश्रो व्याचको एकेडेमीमा १६ जिल्लाका २८ जना बालकहरू आश्रित छन्।
विगत २०७० सालदेखि उनीहरू आवसीय रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा दिक्षा लगायत फुटबल प्रशिक्षण समेत सहारा फुटबल एकेडेमी पोखरा—१७, दोविल्लामा सञ्चालन हुँदै आएको छ। प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजकको रूपमा हिमश्री फुड्स प्रालिको उत्पादन आहा तथा रारा तयारी चाउचाउ रहेको छ ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति र जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीको समन्वयमा पोखरा रङ्गशालाको खेल मैदानमा हुनेछ। कार्यक्रममा मुख्य प्रायोजक हिमश्री फुड्सका निर्देशक प्रकाश केसीले अघिल्लो वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष पुरस्कार राशीमा वृद्धि गर्ने बताए । सोही अवसरमा सहारा क्लब हङकङका कोषाध्यक्ष विल तामाङले सहारा साँझ हङकङबाट संकलन भएको १५ लाख रुपैयाँ सहारा क्लबलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: आईतबार, मंसिर १७, २०७४, ०२:१३:१८